Wụnye VirtualBox na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta | Site na Linux
Virtualbox bụ Oracle virtualization software emere iji mepụta igwe mebere. Na a mebere igwe, nwere ike iji sistemụ arụmọrụ dị ka ngwa n'ime sistemụ arụmọrụ ha ugbu al. Ọ dị ka kọmputa n'ime kọmputa.
A na-akpọkarị ihe a igwe arụmọrụ n'ihi na ha bụ na-eulatingomi sistemụ ndị ọzọ, mana ha anaghị arụ ọrụ na sistemụ ahụ dị ka ezigbo sistemụ arụmọrụ.
Otu n'ime ụzọ iji abụọ OS ọnụ bụ abụọ-buut Windows na Linux. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, belụsọ na ị ga-agbanwe n'etiti sistemụ arụmọrụ site na ịmalitegharịa usoro ahụ. Nke a adịghị mfe.
Yabụ na nkenke, Jiri sọftụwia akụrụngwa, ị nwere ike iji Windows dị ka ngwa n'ime Linux. N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, ọ ga-eri nnukwu RAM. Wayzọ a, ị nwere ike iji Windows na ngwanrọ na mmemme kpọmkwem na Linux, na-enweghị mkpa ịwụnye Windows kpamkpam.
1 Ihe dị ọhụrụ na VirtualBox
2 Esi wụnye VirtualBox 5.2.10 na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta?
Ihe dị ọhụrụ na VirtualBox
Ọ bụ ya mere VirtualBox bụ ngwa a ma ama maka ikwe ka inwe akwụkwọ abụọ a, ugbu a ngwa dị na ụdị ya 5.2.10 nke nwere mmezi ndị a:
VMM: Ofu efu efu pointer ego na MMIO koodu
Nchekwa: Ofu na otutu NVMe controllers na ICH9 nyeere
Neti: Nchọpụta ikuku arụnyere azụ mgbe ejikọtara na nkwụnye na ogbugba ndu IP nke onwe
Ntanetị: edoziri VERR_INTNET_FLT_IF_NOT_FOUND mgbe ị na - ejikọ ụfọdụ ndị nkwụnye na ntanetị Windows
Audio: Edoziri oké ifufe na ndị ọbịa FreeBSD na HDA
Kiiboodu - webatara obere oge iji dozie akụrụngwa ochie nke na-atụ anya ka ị gụọ koodu nyocha na-abata karịa otu oge
Windows Installer: Wepụ "eleghara anya" ihe ọ bụrụ na nrụnye VBox dị ugbu a ka na-agba ọsọ ka mmelite (nke ọma) agaghị arụ ọrụ ruo mgbe onye ọrụ reboot rụrụ.
NAT: Aka njikwaer 0.0.0.0 nke bụ nhazi ziri ezi
BIOS: INT 15h / 87h ọrụ kwesịrị iwepụ ọnụ ụzọ ámá A20 mgbe ọ gwụchara
Mgbakwunye ndị ọbịa Linux: dozie nsogbu site na ịmalite KDE Plasma
Esi wụnye VirtualBox 5.2.10 na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta?
Ngwa ahụ Anyị nwere ike ịchọta ya n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị Ubuntu mana n'ihi na etinyere ngwa ahụ nso nso a ma karịa ihe niile Na mgbe nile mgbanwe o nwere, ọ bụ a bit mgbagwoju anya ka anyị chọta ndị kasị nso-nso versione n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị.
Ọ bụ ya mere iji wụnye ngwa anyị nwere ụzọ abụọ:
Nke mbu bu site na nbudata ngwugwu ugwo ha nyere anyi site na aka oru nke oru a nke anyi nwere ike chọta ebe a.
Emechara nbudata Naanị anyị ga-etinye ngwugwu na njikwa ngwa anyị masịrị anyị ma ọ bụ ị nwekwara ike ime ya site na njedebe na iwu na-esonụ:
Secondzọ nke abụọ bụ site na ọdụ gọọmentị nke ngwa nke anyi nwere ike itinye na sistemu anyi site na iwu ndia.
Naanị anyị ga-emeghe ọnụ ma mee ihe ndị a.
Mbụ anyị gbakwunye repository nye usoro a iwu:
Ugbu a anyị ga-ebubata igodo ahụ ma tinye ha na sistemụ ahụ:
Anyị na-emelite usoro nchekwa usoro na:
Ugbu a anyị ga-etinyerịrị ụfọdụ nkwado ndị dị mkpa maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke VirtualBox na sistemụ anyị:
Finalmente anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ na iwu a:
Ozugbo echichi ahụ mechara, anyị nwere ike ime iwu a iji chọpụta na nrụnye ahụ gara nke ọma, nke anyị kwesịrị ịnata nzaghachi na ụdị nke VirtualBox arụnyere.
Tupu ịmalite iji ngwa ahụ, ọ dị mkpa ịmara na anyị ga-emerịrị ngalaba "VirtualMache" na BIOS anyị, n'ihi na ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, anyị agaghị enwe ike iji VirtualBox na kọmpụta anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Wụnye VirtualBox na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta
I kwesiri ima na inwere otutu njehie na Koodu ị nyere:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key tinye -
N'okpuru ebe a bụ koodu ziri ezi na nnọchi nke ogologo oge maka obere:
Zaghachi Rafael Domínguez Losada
Zoro ezo folda ụlọ gị na Ubuntu 18.04